Loharano tena ilaina 20 Tokony ho Fantatry ny Mpamolavola | Famoronana an-tserasera
Loharano tena ilaina 20 tokony ho fantatry ny mpamorona rehetra
Melisa Perrotta | | Graphic Design, Fitaovana famolavolana, dia midika hoe
Efa nanontany tena ve ianao hoe aiza no toerana tsara indrindra hitadiavana loharanom-pahalalana ho an'ny tetikasanao? Amin'ity lahatsoratra ity dia mitondra lisitr'ireo Tranonkala 20 ilaina ho an'ny mpamorona sary rehetra izay ahafahanao misintona Fandefasana PSD, vektor, hetsika ary fanesoana maimaim-poana.
Mila fotsiny ianao tsindrio ny lohateny voalaza. Ary koa, raha tianao izy ireo, dia azonao atao ny manoritra ny pejy mba hananana azy io ho an'ny tetikasanao manaraka.
2 Color Lovers
4 Lamina maodely
9 Behance fampisehoana mpanorina
11 Sary maimaim-poana
13 Generator sary ho an'ny fampiharana
14 Tarika fanoherana
15 Fanaraha-maso Layrs 2
16 Efitra tonga lafatra 3
17 Afangaroy aho
18 Maneso Up Zones
19 Cloud Cloud
20 Sivana ao amin'ny Instagram
Ity no toerana mety indrindra hikarohana Fanesoana PSD, sary masina ary ny karazana loharano ilaina amin'ny famolavolana anao.
Azonao atao ny miantehitra amin'ity tranonkala ity rehefa manapa-kevitra amin'ny inona ianao Palety loko ampiasao amin'ny tetikasanao.
Toerana mety misintona sary isan-karazany. Amin'ity toerana ity dia afaka mahita ny zava-drehetra ianao manomboka amin'ny gorodona sy gorodona vaovao mankany amin'ny zavatra sy ny firafitra.
Rehefa mila mahazo lamina sy firafitra avo lenta ny toerana tsara indrindra amin'izany dia ny Sublte Patterns misy rakitra 400 mahery.
Natomboka vao haingana ity tranonkala ity Adobe dia manome fampianarana na fampianarana ho an'ny mpamorona ny vao manomboka na ny mpianatra ho an'ny programa Adobe isan-karazany.
Ity dia tranokala mamela anao mamolavola sy manangana pejy web tsy misy kaody.
Raha mila ianao mamorona grid ho an'ireo tetikasanao hampiasaina amin'ny alàlan'ny nomerika na hanonta an'i Gridzzly no toerana tsara indrindra.
Raha nahita endri-tsoratra ianao ary tsy fantatra hoe inona izao, dia azonao atao ny misaotra ny What The Font. Ity dia tranokala mamela anao famaritana ny mombamomba ny typeface amin'ny alàlan'ny sary JPG na PNG karazana.
Behance fampisehoana mpanorina
Manampy anao izany amboary ny fampisehoana nataonao Behance miaraka amin'ny tsindry tokana amin'ny alàlan'ny hetsika Photoshop.
Plugin ho an'ny Photoshop izay mamela anao adika ireo lahatsoratra manomboka amin'ny rakitrao amin'ny fiteny hafa.
Ity banky sary ity taloha fantatra amin'ny hoe sxc.hu dia manome sary 395.000 ho an'ny fisintomana.
Typewolf mampiseho endritsoratra ampiasaina amin'ny tranokala tena izy ary ny mombamomba azy ankoatry ny fanomezana tolo-kevitra amin'ny loharano mitovy amin'izany.
Generator sary ho an'ny fampiharana
Ity fitaovana ity manova ny habeny ary manatsara ny endrik'ireo kisary nataonao amin'ny endrika rehetra ilaina amin'ny iOS sy Android.
Indraindray mety hitranga izany rehefa miasa ao amin'ny Photoshop izay manery antsika fa vita izy ireo fehin'ny fahasamihafana eo amin'ny gradients efa alaina. Ity plugin ity dia mamela ny fanafoanana ity olana ity mba hanana gradient tonga lafatra.
Fanaraha-maso Layrs 2
Layers Control dia fanitarana Photoshop miaraka Skrip 7 izay manamora ny fitantanana ny sosona.
Efitra tonga lafatra 3
Miaraka amin'ity programa ity izay natao manokana ho an'ny mpaka sary azonao atao manova sary mora foana sy intuitively.
Ity fanitarana ho an'ny Photoshop sy Illustrator ity dia ahafahanao mahita loharanom-bola an'arivony tsy mila mivoaka ny programa ianao.
Maneso Up Zones
Ity no toerana mety indrindra hahitana ny fanesoana maro karazana kokoa. Avy amin'ny Ipad, finday amin'ny fakantsary na fanamiana.
UI Cloud no database base design lehibe indrindra eto an-tany misy misintona mihoatra ny 46600.
Ity dia fonosana iray Sivana 13 izay mamerina ny sivana Instagram.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Loharano tena ilaina 20 tokony ho fantatry ny mpamorona rehetra
Teny sy ny mety dikany
Ny endritsoratra mozika manan-tantara amin'ny solosainao